Horjooge iyo hogaamiye maxaa u dhexeeya - Tilmaan Media
Horjooge iyo hogaamiye maxaa u dhexeeya
in BULSHO, MAQAALLO
Masuul ama HORJOOGE kastaa wuxuu hayaa boos ama jago hogaamineed balse horjooge kastaayi ma aha hogaamiye, meesha HOGAAMIYE kastaayi uusan haynin masuuliyad ama uusan joogin boos hogaamineed.
Horjoogenimada iyo hogaamiye nimaduba waa deeq illaaheen bixiyo oo xagiisa uun ka timaada sida labo aayadood oo qúranka ka mid ihi kala tilmaamayaan.
Midan hore EEBE wuxuu siiyaa cid walba oo adoomihiisa ka mid ah, iyada oo aan loo eegeynin diintooda, dadnimadooda, cilmigooda, caqligooda, caafimaadkooda dhimireed iyo kan jidheed midnaba taas oo noqonkarta mid la mahadiyo amase mid lagu hongoobo oo huwan shar iyo shaadh ibleys oo ay ku xeeran yihiin lataliyeyaal masruuf iyo maro deyday ah. Dadkuna isku heeraamaan adaa ii keenay iyo adaa ii lahaa balse midkoodna eed kuma laha keenistiisa, waxayse noqonkartaa bulshadu fal-kaabe. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Tan labaadi waa xikmad EEBE ku meneysto hogaamiyeyaasha uu kheyrka la dooney oo qudha, xikmadaas oo ku dheehan hanuun hogaamineed. Waxaana hogaankaas ama qofkaas la waafajiyaa wanaaga qaybihiisa kala duwan waxayna ka soo ifbaxdaa odhaahdiisa iyo ficilkiisa labadaba oo makhraati iyo muufikeyn midna uma baahna, badanaan wuxuu xidhiidh la leeyahay rabigiisii abuurey.
Hogaankaasi wuxuu dadka dhexdiisa ka helaa aqbalitaan iyo soo dhaweyn ka fog reernimo iyo af-miishaaro ama beenaalayaal buunbuunintood. Hagehaas badanaa waxaa ku xeeran ama la taliyeyaal u ah dad la soo xuley dad ay soo xuleen, dantooduna tahay in samuhu sifo u noqdo guud ahaan bulshada gaar ahaana hogaankeeda sare. Arinkaasna aayadan hoose ayaa tilmaameysa; يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
Hadaba hadey bulsho ama ummadi kala hagmi weydo, isla meereysato, qoloba qolo tuhunto oo ay sidii kaadi dibi isku wareegeysato waxay badanaa daliil u tahay in aysan ummadaasi haysanin hogaamiye balse HORJOOGE Eebe xukun siiyayi hor yuururo. Midaas oo sababta jahwareer iyo is qabqabsi aan barbiloow iyo dhamaad toona lahayn. Qaskaas ama tiihaas oo qeyb ahaan horjoogahaas iyo guulwadeyaashiisu si toos ah uga masuul yihiin. Arintaasna waxaa tilmaan fiican ka bixiyey Alle ha u naxariistee Xaaji Aadan Afqalooc:
Xaajadii ninkii dhayi lahaa kala dhantaalaayo
Dawo iyo iney nabad dhashaa waa midaan dhicin
Hadaba hadii masuulku “HORJOOGUHU” ka aradmo astaamaha ama calaamadaha hogaamiye leeyahay oo ay ka mid tahay in uu leeyahay aragti fog oo xigmad ku salaysan, keenida xal waara oo ku qotoma cilmi iyo khibrad siyaasadeed oo ummada kala haga, abuurida hab iyo nidaam hufan oo ay bulshadu raacdo kaas oo ku dhisan cadaalad iyo sinaan, waxaa ka dhasha arimahan soo socda iyo kuwo kale oo badan oo bulshadeenu maanta la nooshahay.
1- Maamul xumo iyo talo la’aan ama la talin xumo, waxaana badanaa horjoogaha hareer fadhiya guulwadayaal la talin ku baago qaata.
2- Garsoorka iyo hayadaha sharciga oo shaqo gaba, booskana ka saara isla xisaabtanka iyo isi sixitaanka hayadaha kala duwan ee xukuumada talada haysa iyo bulshada dhexeedaba, taas oo u kala xaq soorta dulmanaha bishinta ruugaya iyo daalimkii dhagarta ka galey ee is garab fadhiya muqaaxiyaha dhexdood
3- Tiirarka cadaalada iyo sinaanta oo xar galo bulshadana dhaxalsiisa isnac iyo kala fogaansho ay adkaan doonto in si sahal ah loo dhayo
3- Qorsho la’aan iyo is qabqabsi ku yimaada horjoogayaasha sare gudahooda taas oo meesha ka saarta kaladanbeyntii iyo shaqowadaagii xukuumada dhexdeeda.
4- Musuqmaasuqa iyo boobka hantida qaranka oo baaha iyada oo la isticmaalayo ganacsato aafeysan oo cuqubo iyo inkaar horaba qaba kuwaas oon aduun iyo aakhirotoona xeerineynin lahayna xakame iyo xishood midnaba xag rabi iyo mid aadame toona
5- Tagri-fal iyo ku amar taagleyn awoodeed oo ku fida heerarka kala duwan ee xakuumada taas oo dhalisa in la aaso xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka iyo karaamadiisa.
6- Qabyaalada oo bulaasha, qoysnimada oo xoogeysata iyo weliba qolo beegsiga oo si xowli ah u soo ifbaxa (aarsi iyo dakanooyin hore faadhfaadhidood)
8- Salaadiinta, culumáudiinka iyo abwaaniinta oo gabi ahaanba gaba dawrka ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda, raalina ka noqda jowrka iyo burburka dalkooda iyo dad kooda hadafkooduna noqdo dheef iyo dhuuni iyagoo mar walba la duuban horjoogaha xeedhada salkeeda fadhiya.
9- Madaxda iyo maslaxada dalka oo isku dheehma iyo weliba madaxda iyo masuuliyiinta sare oo la xijiyo ama is xijiya koox ama qabiil gaar ah
10- Saxaafada oo ka indha beesha ama laga indho tiro dhibka dul saaran ummadooda una sawirta dhaan-dabangaale iyo dhadhab aan jirin, suuro fool xuna ka bixisa cidkasta oo xumaha iyo xadgudubka horjoogeyaasha tilmaanta
11- Sharwadayaalka/faasiqiinta ama faasidiinta oo horjoogeyaashu soo dhaweystaan si cayda/caraatanka iyo fasaadka loo sharciyeeyo, isla mar ahaantaana loo fogeeyo muslixiinta ama naamuus wadayaasha iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta samo bixinta ummadan shilalka saaran si booska looga saaro in tooshka lagu ifiyo xadgudubyada abaabulan, boobka hantida ummada iyo soo celinta xaquuqda shakhsiga iyo karaamadiisa isla mar ahaantaana fartana loogu fiiqo danta guud ee ummada iyo horumarkeeda.
Hadaba hadii intaas oo qodob ama badhkood ka soo ifbaxo bulsho dhexdeed waxay daliil sugan u tahay in bulshadaasi god madoow oon ganto la fanto lahayn ka dhex dhawaaqeyso balse aysan is ogeyn bulshadaasi.
Macalin Dhoodaan Alle ha u naxariisto wuxuu ahaa falasuuf mar soo marey ummada soomaaliyeed balse aan helin ummadii hanan lahayd suugaantiisii iyo taariikhdiisii midnaba, wuxuuna halkan ku tilmaamayaa marka masuulku noqdo horjooge ee uu gabo hanaanka hogaamineed.
War qaylaa willane yaa dadkii, waydan kaga yeedhshay?
Siddii waylo baadi ah maxaa, kaga wadhaac siiyay?
Waraabaha qarsoon yaa noqdayoon, ruux wajiga moodnay?
Dadkoo wii leh gaajana witigay, walanqo yaa ruugay?
Waageeni badi yaa ka dhigay, oo walleedh koriya?
In yar baa kuwada wiirsatee, yawgu wacan beesha?
Waadi hadhac ah yaa laga fishoo, bacad ku weeteeyay
Wabi malab ah yaa laga fishoo, sun u walaaqaaya?
Wanaag iyo xorriyad waa dadkuye, walaxdii yaa qaatay
W/Q: Dr. Sadik Hajinur